BERRY HAWTHORN: FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA, HALABUURKA, DIYAARINTA, ISTICMAALKA, KHILAAFAADKA - SOOSAARKA DALAGGA
Hawthorn waa caleemo dhaadheer ama geedo yar yar. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, miraha geedka ayaa la cunay waxaana loo isticmaalaa daroogada xanuunka caloosha. Hadda waxqabadka ficilka waa mid ballaadhan.
Miro-haweenku waa tufaax yar oo leh dhexroor oo ah 0.5-4 cm. Berrinka wuxuu noqon karaa juus-qaab, juqraafi ah ama mid dheer. Abuurka ku jira berrinka ayaa ku yaal meel u dhow calyx ee qaybta sare ee miro iyada oo ka hooseysa lakab khafiif ah maqaarka. Hawthorn wuxuu ku dhacaa labadii bilood ee hore ee xilliga dayrta.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee haweenka iyo faa'iidooyinka jirka ee jirka.
Midabka maqaarka midhaha waxay ku xiran tahay nooca dhirta. Waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto midabadan: midab jilicsan oo huruud ah, midab casaan, casaan, aad u dhif ah madow. Cabbirka berrida wuxuu ku xiran yahay noocyada kala duwan. Caadi ahaan, hawo gaduud oo casaan leh waxay leedahay miro 5-7 mm dhexroor. Noocyo leh miraha waaweyn waxay leeyihiin berry dhererkoodu yahay 3-4 sentimitir. Dhadhanka sidoo kale waa ka duwan yahay noocyo kala duwan. Miro badani waa macaan, oo la mid ah tufaaxa. Yar yar ee dhadhanka waxay la mid yihiin lafdhabarta. Naxariistii dhammaantiis oo maqan.
Ma taqaanaa? Biyoolajiga Ruushka iyo tarnuunka Ivan Michurin ayaa ku ruqeeyey haweenta dhiigga cas iyo pollinated ubaxyada ash buur ah iyo helay noocyo kala duwan oo dhir ah, hybrid, gargarka buurta buurta. Midabkeedu wuxuu noqday mid macaan iyo midho kulul oo ay ka lumeen qadhaadhkooda.
Warshadda waxaa ku waajib ah in ay awood u leedahay daaweynta fitamiin iyo macdanta hodanka ah. Maxaa ku siinaya dhismaha bogsiinta, waxaan hoos ku qeexnaa.
Halabuurka waxaa la siiyaa miraha dhiigga cas-cas, sida ugu badan ee loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka ee noocyada. Vitamiin ee 100 garaam oo berry ah:
Vitamin E (alpha-tocopherol) - 2 mg;
Vitamin C (ascorbic acid) - 90 mg;
Vitamin A (Retinol) - 2,333 mg;
carotene beta - 14 mg.
Macdanta 100 garaam oo berry ah:
potassium - 13.1 mg / g;
Calcium - 3.0 mg / g;
manganese - 1.0 mg / g;
birta - 0.04 mg / g;
magnesium - 0.04 μg / g;
copper 0.29 μg / g;
zinc - 0.07 μg / g;
Cobalt - 0.37 μg / g;
chromium - 0.01 μg / g;
birta - 0.03 μg / g;
Selenium - 11,8 μg / g;
Nickel - 0.1 μg / g;
strontium - 0.06 μg / g;
iodine - 0.06 μg / g;
lead - 0.05 μg / g;
Boron - 2.0 μg / g.
Waxyaabaha kale ee ku jira saxarka:
xeryahooda oo firfircoon
asiidhyada dabiiciga ah (citric, caffeic, oleic, tartaric).
Qiimaha nafaqada ee miraha:
borotiinka - 0.8 g;
carbohydrates - 14 g;
fiyuusta cuntada - 3.6 g;
biyaha - 82.4 g
Qodobka xasaasiga ah ee 100 g oo miro ah - 58.5 kcal.
Waa muhiim! Si aad u isticmaasho miro qallalan sida badeecadda cuntooyinka laguma talinayo tiro badan, sababtoo ah dhirta ayaa awoodi karta inay hoos u dhigto cadaadiska. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo miisaanka kaliya marka uu keeno barar nudaha.
Waa maxay isticmaalka
Qodobbada soo socda ayaa leh saameyn faa'iido leh:
Retinol waxay hagaajinaysaa qummanaanta muuqaalka, waxay kicisaa hababka dib u soo kabashada.
Beta-carotene wuxuu u dhaqmaa sida antioxidant, wuxuu dhaqaajiyaa nidaamka difaaca jirka, wuxuu ka saaraa xagjiryada bilaashka ah ee jirka.
Faytamiin C ayaa ku lug leh nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka iyo dib-u-soo-kabashada iyo, sida beta-carotene, waxay u taagan tahay difaaca jirka.
Potassium wuxuu caadi u yahay dheelitirka acid-saldhigga wuxuuna xakameynayaa qadarka magnesium ee jirka. Waxay hagaajineysaa shaqada habka kaadi-mareenka, taas oo sida caadiga ah ka dhigaysa ka-saaritaanka dheecaanka xad-dhaafka ah ee jirka. Tani waxay yaraynaysaa sameynta barar. Sidoo kale caadiyan qiyaasta wadnaha.
Antioxidant kale waa molybdenum. Waxa uu ka mas'uul yahay haweenka taranka oo caadiyan dheef-shiid kiimikaad hooseeya.
Hawthorn waxay ka mid tahay toban dhirta ugu caansan. Liistadaan sidoo kale waxay leedahay Echinacea, Rosehip, Chamomile, malayga, aloe, cagaarka, dhirta, geedka.
Wixii dadweynaha labka ah, haweenku waa lagama maarmaan marka ay dhacdo xaalad xumo. Dabcan, geedka laftiisa ma awoodo inuu xalliyo dhibaatada. Kaliya ragga qaba dhibaatooyinka dhirta hore waxay u xalin karaan iyaga oo isticmaala shaaha caadiga ah ee miraha geedka. Inta soo hartay waxaa badanaa loo yaqaan 'hawthorn' sida qayb ka mid ah liiska ugu muhiimsan ee daroogooyinka. Infusions iyo decoctions waxay ka caawisaa dejinta nidaamka dareenka, taas oo ka takhalusta sababaha nafsadda ah ee awood la'aanta.
Intaa waxaa dheer, dhirta daawada waxay saameyneysaa shaqada xubnaha, si aan walwal lahayn xiriir la leh habka taranka. Waxay caadi u tahay waxqabadka habka wadnaha, kaas oo hagaajiya wareegga dhiigga. Iyadoo kordhinaysa xoojinta socodka dhiigga, wareegga dhiigga wuxuu hagaajinayaa meelaha meelaha durugsan. Ragga dhexdooda, ciriiri caadi ahaan waxay ku dhacaan aagga gumaarka. Iyadoo wareegga dhiigga ee caadiga ah, socodka nafaqooyinka ayaa dib loo soo celiyaa, taas oo macnaheedu yahay in dhibaatooyinka dhirta la waayay.
Ragga waaweyn, marka qaadashada tinctures beerta, taageeraan shaqada wadnaha. Waxaa jira xoojinta xididdada dhiigga, muruqa wadnaha. Fiitamiinada iyo antioxidants waxay ka hortagtaa in fayrusku galo jidhka isla markaana gacan ka geysto ciribtirka geedi socodka nabarrada.
Waa muhiim! Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, iyada oo maqnaanshaha daroogooyinka kale, miraha dhiigga cas-gaduudan ayaa loo isticmaalay dawo wadnaha ah.
Hawthorn waxay saameyn ku leedahay jirka dumarka. Waxay caadi u tahay hawsha nidaamka dareemayaasha, taas oo u oggolaanaysa haweeney in ay ilaawaan cabsida aan macquul ahayn, hurdo la'aan. Wuxuu si fiican u koontaroolayaa isbedelada hoormoonka inta lagu guda jiro menopause, waxay tirtirtaa calaamadaha aan fiicnayn ee menopause. Waxa kale oo caadi ah qanjirka thyroid. Inta lagu jiro muddooyinka xanuun leh, waxay u dhaqmeysaa sidii qof xanuun leh.
Waxay xoojisaa maraakiibta dhiigga, waxay caadiyan ka dhigtaa socodka dhiigga, sidaas awgeed ciribtirka angina, taakawidhiya, waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga, waxay ka hortagtaa samaynta dabaqada atherosclerotic.
Wuxuu ka caawiyaa dhibaatooyinka mareenka mindhicirka, kelyaha, beerka iyo galleyda.
Haweeney kasta oo ku jirta jagada ayaa ka welwelsan sida tani ama sheyga u saameyn doonto koorsada uurka, haddii ay waxyeello u geysaneyso ilmaha. Muddadani waxay leedahay midabkiisa gaarka ah ee codsiga haweenka.
Miyuu suurtagal ahayn inta lagu jiro uurka iyo nuujinta
Dumarka uurka leh, isticmaalka dhirta daawooyinka waa mid la aqbali karo, laakiin kaliya qaabka gogol-galka iyo tinctures-ka aan khamriga lahayn. Waxay kaa caawin doonaan in ay caadi u noqdaan wadnaha wadnaha, ka saaraan bararka, sameynta geedi socodka dheef-shiid kiimikaadka iyo hagaajinta caabbinta jirka ee fayraska. Dabcan, daawada waa in dhakhtarku kugula taliyaa.
Waa muhiim! Suurtogal maaha in qofku iskiis u dhiibo hawshiisa, sababtoo ah haddii aan si haboon loo qaadin ama xad dhaaf dhaafin, itimaalka uurku waa mid aad u sarreeya.
Laakiin inta lagu jiro xilliga naas-nuujinta, cabitaanka daawooyinka iyo nooca berry waa in la tuuraa. Marka haweenku gasho jidhka ilmaha iyada oo loo marayo caanaha hooyada, waxay u hawlgelisaa hawsheeda daweynta ee jirka ilmaha. Hase yeeshe, dhaqdhaqaaqa soo kordhay, ficilkan oo kale ma aha mid lagama maarmaan uuna dhaawici karo. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad isticmaasho hawo qaboojinta, la tasho dhakhtarkaaga.
Suurtagal ma tahay in la siiyo haweenka uurka leh
Berry waa ka hortag carruurta yaryar. Jidhkooda ma jiraan wali isbedeladaas oo loo baahan yahay in la saxo. Marmarka qaar khabiirada wadnaha iyo dhakhaatiirta neuropatu waxay soo qori karaan infusions, laakiin tani waxay kaliya u tahay jirro halis ah. Waa la oggolyahay in ay haweenka u sheegaan sidii wakiil prophylactic oo kaliya haddii ilmuhu 12 jir yahay. Waxaa la soo dhejiyay darmuus (10 berry ah halkii litir oo biyo ah) oo qaado 70 ml maalintii.
Waxyeellada suurtagalka ah iyo ka hortaga midhaha
Geedka daawada ma keeno waxyeelo jidhka ah. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah qabaa'ilka. Laguma talinayo in la beddelo qiyaasta cabitaanada iyaga u gaar ah, sida qiyaasta xad dhaafka ah waxaa jiri kara nooc ka mid ah sumowga. Sidoo kale, ha cabbin tinctures calool madhan. Matag iyo shuban ayaa dhici kara. Ha kugula talin inaad cabto biyo qabow. Tani waxay keeni kartaa colic. Waa inaad aad uga taxadirtaa warshadda xasaasiyadda, boogaha, dadka qaba xanuunka caloosha iyo dhiig karka.
Goorma iyo meesha ay ka kooban tahay ururinta ugu fiican
Si ay dhirtu u hesho faa'iido, waa in si wanaagsan loo diyaariyaa.
Berry waxaa la goostay inta ay Bisaylkiisa. Tani waa dhammaadka Sebtembar. Ururinta waxaa la samayn karaa ka hor dhaxan ugu horeysay. Waxaa ugu wanaagsan in la goosho jawiga qoyan, cimilada subaxda, laakiin ma aha goor hore. Waa lagama maarmaan in dharabku soo dego. Waxyaabo kale oo muhiim ah - wakhti aad uga hor tagto shimbiraha. Waxay jecelyihiin inay ku cunaan miro geedka.
Ma aha mid mid midka mid ah midhahaas u soo ururin, laakiin jarjar galka oo ku habboon qaboojiyaha, ka dib markii ay kala soocaan oo soo tuuraan kuwa la qarxiyey iyo kuwa aad u culus.
Meelo ku habboon
Laguma talin in la soo ururiyo miraha ka yimaada geedaha mashquulka ah iyo meelaha warshadaha. Waxaa ugu wanaagsan in la helo geedo dhir ah oo ku yaal geesaha kaynta ama glades, ka dib markii geedaha ka jarayo kaynta. Oo waa suurad wacan in kaymaha ay koraan meelo baadiyaha ah.
Sida loo qalajiyo midhaha
Miraha waa la qalajin karaa labadaba dabiiciga ah iyo dabeecad ahaan. Xaaladda kowaad, qalajinta ayaa noqon doonta mid aad u dheer, laakiin walxaha waxtar leh ayaa sii ahaan doona. Miro la tiriyey oo la maydhay ayaa lagu dhajiyay maro ama warqad hal lakab. Sidaa oo kale, waxay ku tageen goobta qiiqa ama meel kale oo shad ah iyo meel qallalan oo leh hawo wanaagsan.
Si looga hortago miraha ka soo qulqulaya inta lagu jiro qalajinta, waxay u baahan yihiin in loo soo jeesto si wakhti ah. Qalitaanka waxay qaadataa laba maalmood. Marka miraha la qalajiyo, waxay noqotaa burbur iyo iftiin. Haddii dhowr berry qallalan ku tuujinayaan feeraha, markaa waa inaysan isku dhajin midba midka kale. Inta lagu jiro qalajinta, waxay si weyn u yareeyaan cabbirka. Miro qalalan ayaa u muuqda dhadhan qadhaadh iyo caraf udgoon. Habka labaad ee qalajinta waxaa ku jira foorno ama qalajiyo khaas ah. In iyaga, miraha la qalajiyey at heerkul ah 30-40 digrii ama 40-60 digrii, iyadoo ku xiran tayada aad u baahan tahay alaabta ceeriin.
Wanaajinta sifooyinka galka
Xasuuso in sifooyinka wanaagsan ee warshadu ay muuqdaan marka si haboon loo daboolo. Tixgeli sida loo sameeyo cabitaannada hawada iyo sababta loo isticmaalo.
Isticmaal, isticmaal iyo diyaarinta tincture
Tincture on khamriga waxaa loo diyaariyey si madax bannaan ama iibsan farmashiyaha. Waa kuwan soo socda ee sahlan: 25 g oo miro ah waxaa ka buuxsamaya 100 g oo ah aalkolo caafimaad ama vodka isla tiro. Leave si aad u soo dhiga meel mugdi ah muddo 10 maalmood ah. Isticmaal rubuc saacad ka hor cuntada kahor 30-60 dhibcood saddex jeer maalintii.
Tincture Tani waxay ka caawisaa in ay caadi u tahay shaqada wadnaha, nidaamka dareemayaasha. Waxaa lagula talinayaa cabsida, walaaca, dhibaatooyinka dhirta iyo xididada, hoos u dhigista cadaadiska.
Ma taqaanaa? Tincture alkolool ee hawthorn waxaa loo isticmaalaa daawada caafimaadka xoolaha si ay u xalliyaan dhibaatooyinka wadnaha iyo in ay caadada u wareegga dhiigga ee xayawaanka.
Isticmaal, dalbasho iyo diyaarinta maraq
Decoction ah ee miro ayaa la sakhraan leh stenocardia, arrhythmias, extracystoles, si caadi ah heerarka kolestaroolka.
Habka diyaarinta waa mid fudud: hal galaas oo biyo karkar ah oo dab la qabadsiiyo ayaa soo dhajiya qashinka dhulka hoostiisa. Karkari ilaa inta ay ka boodi karto nuska dareeraha. Maraq la qaboojiyey waa la cabaa nus shaaha ah saddex jeer maalintii kahor cuntada. Muddada koorsadu waa 3-4 bilood.
Isticmaal, isticmaalka iyo diyaarinta faleebo
Faleebo faleedka waxaa lagu taliyaa in la isticmaalo si caadi ah loo dhimo heerka garaaca wadnaha, si loo hagaajiyo wareegga dhiigga, oo leh cillado wadnaha.
Miraha oo dhan ayaa lagu shubay biyo karkaraya waxayna tagayaan si ay u istaagaan habeenkii 8-10 saacadood. Si aad u sahlanaato inaad cabto faleebo, waxaad ku karsan kartaa darmuus. Wixii litir oo biyo ah, waxaad u baahan doontaa laba cantoobo oo beruud ah.
Qaado qaado qaado saddex jeer maalintii kahor cuntada.
Isticmaal, dalabka iyo diyaarinta shaaha
Shaashooyinka waxaa loo isticmaalaa kaniiniyada iyo daaweynta hurdada. Cuntadani waxay la mid tahay faleebo. Dhamaan litir biyo ah diyaarso 2.5 caano ah (qiyaastii 30 berry) hawo geel ah oo ka bax inaad soo dhoofiso habeenkii. Si aad u yeelato saameyn la dejiyo iyo saamayn, cabbo ka hor wakhtiga jiifka. Waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro maalinta.
Guryaha qurxinta ee haweenka
Maaddaama ay ka kooban tahay fitamiin iyo macdanta, hawada ayaa si fiican u dhaqdhaqaaqa maqaarka, nafaqeynta, qoyaan, nadiifinta. Waxay leedahay kacdoon, dib u soo ceshaday. Waxay kicisaa hababka dheef-shiid kiimikaad ee maqaarka.
Maaskaro wajiga ah:
Miraha Hawthorn waa la diiri karaa oo la jarribay galay boqoshaada.
Si loogu daro malab, labeen dhanaan ama kareem.
Isku dar waxaa lagu daboolaa wajiga muddo 10 daqiiqo ah kadibna la dhaqo.
Maaskarada waxay kaa caawineysaa inaad dib u soo celiso maqaarka, garaaca finanku. Maaskaro leh maqaar ool ah:
Beerka iyo casiirka ka soo berry ah ee warshadda waxaa lagu qasi karaa saddex qaado oo jiis ah oo leh daroogada dufanka eber iyo qaaddo of yogurt.
Maaddooyinka ayaa si fiican loo isku qasan yahay.
Halabadani waxaa loo isticmaalaa hal mar toddobaadkii si loo nadiifiyo loona dhejiyo nabarada.
Maaskaga maqaarka qalalan:
Afar canab oo kala duwan oo cagaaran ayaa ku xiran 1 tsp. cabitaanka haweenka.
Codso 20 daqiiqo si aad u nuugto oo u quudiso maqaarka wejiga.
Sida loo karsado berry: Cunto cusub
Jam waa hab macquul ah oo sahlan oo lagu helo nafaqooyin. Waa kuwan soo-saarka caadiga ah ee saxan.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato habka si habboon loogu qalajiyo gurigaaga iyo waxa diyaar garowga laga samayn karo hawo qaboobaha xilliga jiilaalka.
Si aad u dhigtid macaanka, waxaad u baahan doontaa:
1 kg khudradda beeraha;
0.5 kg oo sonkor ah.
Waxa kale oo aad u baahan tahay digsi oo ay ku jirto macaanka, xabadaha iyo daboolka la kariyo.
Miraha waa la dhaqaa, diiray oo ka soocaya jirida. Ka dib markaad ku shubtid digsiga, iyo sonkorta ayaa lagu daraa. Foomkan, maaddooyinka ayaa ka tagay dhowr saacadood, sidaas darteed berry ayaa u ogolaan casiir. Ka dibna dheriga dabka saar. Marka ay alaabtu bilaabaan inay karkariyaan, ololka gubanaya waa in la dhimo si markaa macaanka uusan u cararin. Habka loo karsado waxaad u baahan tahay inaad walaaqdo sheyga si aysan u dhicin meel hoose ee saxanka. Si aad u fahamtid haddii macaanka la kariyey ama aan la karinin, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daadiyo dusha qabow. Badeecadda la dhammeeyey waxay ku jiri doontaa qaabka dhibicda. Laakiin xusuusnow, ka dib qaboojinta waxay sii dhumucaysaa. Jam waxaa lagu shubayaa barmiilkii hore ee la dhalaaley oo la giringiriyey. Haddii aadan rabin inaad kaydiso wakhti dheer, waxaad si adag u xiri kartaa weelka daboolka daboolka ah kuna rid qaboojiyaha.
Waa muhiim! Inta lagu jiro cunto karinta waa lagama maarmaan in kor loo qaado awooda dabka ololka si tartiib tartiib ah. Tani waa lagama maarmaan si ay casiir si buuxda u kala soocaan berry, oo aan la gubin.
Ma aha oo kaliya berry ay yihiin qiimo leh ee hawada. Leaves, ubax, jilif ayaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Waxyaabaha ugu muhiimsan - in la xasuusto in wax waliba ay faa'iido leedahay isticmaalka dhexdhexaad ah.